Saziyekela thina ukushaya iSundowns, kusho uPule wePirates - Impempe
Saziyekela thina ukushaya iSundowns, kusho uPule wePirates
January 5, 2021 Impempe.com
Isiphekepheke somgadli we-Orlando Pirates, uVincent Pule, sithi bekungafanele baphume enkundleni beshwiba izandla ngesikhathi bedlala neMamelodi Sundowns emidlalweni weDStv Premiership ePitoli ngoMgqibelo. EZimnyama zabuya nenduku yombangandlala kulo mdlalo, yize zazidlala kahle futhi kuyizo ezazihamba phambili ngokuphatha ibhola. Nokho igoli likaBrian Onyango esiwombeni sokuqala yilona elagcina liqinisekise ukuthi amaBrazilians awola wonke amaphuzu.
UPule ukhale ngokuthi ukube basebenzisa elilodwa noma amabili amathuba abawathola, ngabe kukhulunywa okunye kuyimanje.
“Bekuwumdlalo onzima. Sizamile, sawathola amathuba futhi ngicabanga ukuthi bekumele sivalele enethini elilodwa noma amabili.
“Amabhola asuswa phansi yinto ebese siyiphinda-phinde kaningi siyenza ejimini kodwa ngebhadi sidliwe ngalo,” kusho uPule.
Uthe nangesiwombe sesibili bazama ukuyicindezela iSundowns sebefuna elokulinganisa ke nje okungenani kodwa kwala khona ukwenza.
“Sadlala kangcono kakhulu ngesiwombe sesibili futhi sabacindezela kodwa igoli alangasivuma nhlobo,” kuphetha uPule.
Khonamanjalo, iPirates izitholele iholidinyana namuhla njengoba umdlalo obekumele iwudlale neSagrada Esperanca kwiCAF Confederations Cup ungabange usadlala kulandela ukuhoxa kwaleli iqembu lase-Angola, likhala ngokusabela ukuphepha ngenxa yokubheduka kabusha kweCovid-19 eNingizimu Afrika. IPirates ibe seyiwuphiwa lo mdlalo yadlulela esigabeni esilandelayo.
EzikaJosef Zinnbauer sezizoze zibuyele ensimini ngeSonto lapho seziyogadulisana khona neSwallows FC koweligi.
Previous Previous post: AmaProteas aphinde abukisa ngeSri Lanka, akhala emuka nochungechunge
Next Next post: Sekuseduze lifezeke elokudlala e-England kuTau